Clicky ayaa bilaabay qalabkii Google | Martech Zone
Clicky wuxuu bilaabayaa Qalabka Google
Jimco, Oktoobar 5, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haddii aad aqrisay bloggeyga in muddo ah, waad ogtahay inaan ahay taageere weyn oo ah Falanqaynta Websaydhada Gujiska ah. Waxay si fudud u tahay barnaamij fantastik ah, miisaan fudud, oo aan macno lahayn oo ah falanqaynta Websaydhka ee ku fiican barta internetka. Aad baan u jeclaaday oo xitaa waxaan ku qoray plugin-ka WordPress-ka ah!
Hadda waxaa imanaya iGoogle Clicky Dashboard oo uu qoray Scott Falkingham Fikrad Cajiib ah:
Qaado waxqabadka oo dhan Kooxda oo ku rid Qalab fiican! Cajiib! Uma baahnid inaad isticmaasho Qalabka Google ee boggaaga iGoogle, sidoo kale. Qalabka Google ayaa la dhigi karaa meel kasta oo leh sumad qoraal yar oo nadiif ah. Aad ayaan uga helay Gadget-ka oo aan cusbooneysiiyay ku-xirnaanta WordPress oo aan u diray Sean! Waxaan rajeyneynaa, inuu sii deyn doono qalabka cusub ee Maamulka qalabka uu ku rakiban yahay!
Si aad u hesho Qalabka, tag si aad uqorto Kooxda. Waxaad ka soo dejisan kartaa Qalabka Google iyo plugin-ka WordPress bogga wanaagsan.
Tags: David Siteman GarlandCaqli Badan YahayKordhinta xagga sareSuuqgeynta Twitter
Oktoobar 5, 2007 at 11:44 PM
Waan jeclahay gujiyaha, waxaan dhawaan ku daray balooggayga runtiina waan jeclahay isku xidhka isticmaalaha iyo cabbiraadaha uu adeegsado. Aad ayaan uga jeclahay markaa Google Analytics, waxaan u maleynayaa inta badan sababta oo ah habka ay u soo bandhigto macluumaadka habka ay Google Analytics u sameyso.
Weli waxaan ku hayaa labadaba boggeyga haddii aan beddelo maskaxdayda ama Google waxay hagaajisaa cabirrada waxaanan rabaa xogta isbarbardhiga.
Oktoobar 6, 2007 at 6:12 AM
Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay waxa aan ugu jeclahay sidoo kale, Dustin! Waxaan sidoo kale hayaa Google Analytics agagaaraha - Waan jeclahay awooda garaafka - gaar ahaan awooda lagu sameeyo falanqaynta isbarbardhiga xilliyada gaarka ah. Sawir qaadista ku saleysan flash-ka ayaa ah mid caqli gal ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha uu Clicky sameeyo ee GA ka tuuraya biyaha waa awooda lagu raadinayo soo dejinta. Maaddaama aan inta badan tusaalooyin ku soo qaato bartayada, waa muuqaal aad u wanaagsan aniga inaan daawado!
Oktoobar 8, 2007 at 9:53 PM
Waxaan ahay taageere weyn oo gujinaya. Waan jeclaan lahaa inbadan haddii si kasta oo qoraallo caan ah looga soo saari karo gujis lagu muujiyo goobta - dhaxalka css.
Anigu ma ahi cod-bixiye, laakiin waxaan jeclaan lahaa haddii qof sidan samayn karo * tilmaan maldahan